Tag: kumanikidza vhidhiyo | Martech Zone
Tag: vhidhiyo yekumanikidza
Isu tanga tichisangana nemaonero mutengi nhasi uye tanga tichikurukura zvinokanganisa webhusaiti mutoro kumhanya. Pane kurwa kuri kuitika paInternet izvozvi: Vashanyi vari kuda zvakapfuma zvekuona zviitiko - kunyangwe pane epamusoro-pixel retina kuratidza. Uku kutyaira mifananidzo hombe uye resolution dzakakwirira dziri kuputika saizi yemifananidzo. Majini ekutsvaga arikuda mapeji ekukurumidza ane mavara makuru anotsigira. Izvi zvinoreva kuti mabheti akakosha ari kushandiswa pane zvinyorwa, kwete mifananidzo.